Madaxweyne Xasan Oo Soo Dhaweeyey Wasiirada Badan Xilli Macallimiinta “Aada Dugsiyada” Mushaar Waayeen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan Oo Soo Dhaweeyey Wasiirada Badan Xilli Macallimiinta “Aada Dugsiyada” Mushaar Waayeen
Muqdisho, Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa sheegay inuu aqbalay soo jeedintii Ra’iisul Wasaaraha ee Golaha Wasiirada cusub oo ka kooban shaqsiyaad khibrad iyo waayo aragnimo leh.
Golaha Wasiirada oo xalay 2:00AM habeenimo oo dadka Soomaaliya hurdaan Muqdisho looga dhawaaqay ayaa ka kooban 55 xubnood oo kala ah: 25 wasiir, 25 wasiir ku xigeen iyo 5 wasiirudowle.
“Waxaan aqbalay Ra’iisul Wasaaraha soo jeedintiisii ee Golaha Wasiirada cusub ee uu soo xulay oo matala dhammaan gobolada dalka. Golahan Wasiiradu waxey heystaan kalsoonideyda. Golahan Wsiirada waxaa sugaya howl aad u culus oo looga baahanyahay inay dhameystiraan dib-u-habeynta iyo dib u dhiska uu dalku u baahanyahay” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
“Ra’iisul Wassare Abdiweli Sheikh Ahmed Mohamed waxuu heystaa taageeradeyda buuxda, waxaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u xaqiijinayaa inaan ognahay howlaha culus ee na horyaalla. Waxaana idiin caddeyneynaa sida ay nooga go’antahay isbedel dhab ah oo muuqda, isla markaana la dareemi karo, shacabkuna ay aamini karaan.” ayuu sidoo kale yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
“Waxaan rumeysannahay in Xukuumaddan cusub ay horyaalaan caqabado fara badan. Waxaana u baahanahay in xasilinta iyo amniga la sii dar-dargeliyo, la horumariyo adeegyada bulshada, dar-dar gelin lagu sameeyo maamulka iyo maareynta maaliyada, iyo sidii dib u dhiska dalka looga shaqeyn lahaa.
Waxaan ka codsanayaa Baarlamaanka inay waajibaadkooda dastuuriga ah ka gutaan oo ay ansixiyaan, si Xukuumaddu ay u dar-dar geliso qorshaha siyaasadda, amniga, dib u habeynta maaliyadda iyo adeegyada bulshada, oo muhiim u ah xasilinta iyo horumarka Soomaaliya” ayaa sidoo kale ka mid ahaa warka kazoo baxay madaxweyne Xasan.
Wasiiradan oo sida la dareemayey lagu soo xulay qaab culeys badan ayaa ka yaabiyey umadda Soomaaliyeed, iyadoo la ogyahaya dhaqaale darrada ka jirta dalka, islamarkaana aan la dabooli kareyn maaliyadda ay u baahan yihiin.
Shalay waxaa Muqdisho shaqo joojin uga dhawaaqay macallimiinta Mashruuca ‘Aada Dugsiyada”, kuwaasoo horay ballan loogula galay in la siinayo $200 dollar bishii oo $100 ka mid ah ay bixinayaan Hay’ado caalami ah, halka $100 kale madaxweyne Xasan ballan qaaday.
Macallimiintaas waxey wayeen cid lacag siisa, taasina waxey ku kaliftay iney shaqada joojiyaan, marka waxaa la is weydiinayaa xageen wasaaradahan faraha badan dhaqaale looga keeni doonaa? Mise musuqmaasuq ayey arrintu u xuub siiban doontaa?
Tarsan Oo Diiday Xil Looga Magacaabay Golaha Wasiirrada Cusub